Mashiinka Mashiinka Mashiinka iyo Warshadaha - Soosaarayaasha Maskaxda Shiinaha
Wajiga Mashiinka Maskaxda Maska Saarka
Faahfaahinta ： Hantida: Qalabka Polymer Medical & Alaabta Goobta asal ahaan: Fujian, china Qalabka Qalabka: Fasalka I Waxyaabaha: pp aan lahayn, warqad warqad duuban Midabka: Buluug / cagaar / caddaan / casaan Cabbir: 17.5 * 9.5cm BFE: kor ka 99% Shahaado : Xirmooyinka CE: 50pcs / sanduuq, 2000pcs / ctn Asal ahaan: Shiinaha MOQ: 10000 gogo 'Sheyga magaca: waji-xidhka waji-xidhka astaamaha: Faa'iidadeena: 1. Welcom OEM & ODM. 2. Qiimaha Warshadaha, kala duwanaanshaha qiimaha dhexe. 3. Tayada si wanaagsan ayaa loo xakameyn karaa. 4. p badan oo ...
Faahfaahinta ： FFP1 / FFP2 / FFP3 Respirator Maskoolka Ciidda NIOSH Daadi kara N95 Wajiga Mashiinka Alaabada Mashiinka N95 Maska / ffp1 maaskaro / ffp2 maaskaro / ffp3 maaskaro Waxyaabaha cufnaanta sare ee dharka aan dunta lahayn + tayo sare leh firfircooni karbo kaarboonka + shaandhada suufka ah + kuwa aan qotomin dharka midabka Grey, Caddaan, Qiimaha Neefsashada Buluuga ah Nooca Heerarka Isqarxinta Dhegaha / Codadka Niosh, N95 Ilaalinta heerka KN95 BFE> = 95% Baakadaha 30 kumbuyuutar / sanduuq, 10 sanduuq / kartoon. Cabbirka kartoonka: 66 * 29 * 30cm Codsiga ： 1 ...
Maaskaro loogu talagalay Dab-Dabka
Tilmaamaha ： 1.3D naqshad ahaaneed oo bini aadamnimo ayaa ku habboon wajiga, sanka ayaa la hagaajin karaa si looga fogaado in hawadu soo baxdo 2.Naqno-la'aan, dib ayaa loo isticmaali karaa ilaa 7 jeer 3.Prevent dhibco / PM2.5 4.Electrostatic meltblown maro 5.Miltiple filter filter 6. Dhegaha raaxada leh 4.Marka si ahaan loo duubay, ka aamin san isticmaalka badan; 1PCS / OPP, 50PCS / BOX, 12BOX / CTN, 600PCS / CTN 5. Caano bulukeeti buluug aan muuqan, oo si xor ah u qaabeeya si ay ugu haboonaato qaabab biriijyo sanka kala duwan, badbaadin badbaado iyo taam buuxa. Codsi: 1. Codsi: adeegso ...
Maaskaro FF2 ah
Faa'iidadeena ： 1. Welcom OEM & ODM. 2. Qiimaha Warshadaha, kala duwanaanshaha qiimaha dhexe. 3. Tayada si wanaagsan ayaa loo xakameyn karaa. 4. Alaab fara badan, qaabka, nooca, nashqadaha iwm 5. Wax alla wixii aad rabto, waxaan kuu raadin karnaa si sahlan wakhti kasta. 6. Yaqaanaan suuqa iyo badeecad kasta oo aan bixinno. 7. Koox xirfad iyo khibrad leh. 8. "Jawaab Degdeg ah" & adeeg fiican ka dib iibinta. Aqoon isweydaarsiga Wax Soo Saarka ： Baakadaha iyo Dhoofinta m Muddada Bixinta: Waxaad ku bixin kartaa amarka adigoo adeegsanaya T / T, ...
Maaskaro Fust2 ah
Tilmaamaha ： Faa'iidadeenna ： 1. Welcom OEM & ODM. 2. Qiimaha Warshadaha, kala duwanaanshaha qiimaha dhexe. 3. Tayada si wanaagsan ayaa loo xakameyn karaa. 4. Alaab fara badan, qaabka, nooca, nashqadaha iwm 5. Wax alla wixii aad rabto, waxaan kuu raadin karnaa si sahlan wakhti kasta. 6. Yaqaanaan suuqa iyo badeecad kasta oo aan bixinno. 7. Koox xirfad iyo khibrad leh. 8. "Jawaab Degdeg ah" & adeeg fiican ka dib iibinta. Aqoon isweydaarsiga Wax Soo Saarka ： Baakadaha iyo Dhoofinta ： 1. FedEx / DHL / UPS / TNT oo loogu talagalay sambalka, Doo ...
Mashiinka Wajiga Maskaxda ah ee CE FFP1
Baarista Waxqabadka Barida Barbaarta ayaa ah waxqabadka ugu muhiimsan ee dharka kahortagga, oo ay ku jiraan saddex dhinac: waxqabadka caqabad dareeraha ah, waxqabadka carbiska microbial, waxqabadka filtariska. Xakameynta dareeraha ah waxaa loola jeedaa dharka ilaalinta caafimaadka waa inay awood u leedahay inay ka hortagto galitaanka biyaha, dhiigga, aalkolada iyo cabitaannada kale, oo leh in ka badan 4 heerar oo biyo-la'aan ah, si looga fogaado fayraska ay qaadaan dhiigga bukaanka, dareeraha jirka iyo dheecaanka kale ee faafa cudurka caafimaadka shaqaalaha ...
Mashiinka Xaragada CE FFP1
Faa'iidadeena ： 1. Welcom OEM & ODM. 2. Qiimaha Warshadaha, kala duwanaanshaha qiimaha dhexe. 3. Tayada si wanaagsan ayaa loo xakameyn karaa. 4. Alaab fara badan, qaabka, nooca, nashqadaha iwm 5. Wax alla wixii aad rabto, waxaan kuu raadin karnaa si sahlan wakhti kasta. 6. Yaqaanaan suuqa iyo badeecad kasta oo aan bixinno. 7. Koox xirfad iyo khibrad leh. 8. "Jawaab Degdeg ah" & adeeg fiican ka dib iibinta. Waa maxay walxaha imtixaanka? Dharka ilaalada caafimaadku waa aalad ilaalin badbaado leh oo aad u sarreysa ...